» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग ३
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग ३
१७ चैत्र २०७६, सोमबार २०:५२
मकवानपुर, १७ चैत । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ अहिले चर्चित बन्दैछ । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस शोका २ वटा अडिसन राउण्डहरु प्रसारण भईसकेका छन् । यस भिडियो सिरिजको तेस्रो भागमा पोखरा अडिसनबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका ३ प्रतियोगीहरु अमिन परियार, मनिशा राना र फुर्बा लामाका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
७) अमिन परियार– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि पोखराबाट छानिएका सातौँ प्रतियोगी हुन् अमिन परियार । उनले अडिसनमा ‘आमा हुन’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिलाई सबै निर्णायकहरुले मन पराएका थिए । उनी एउटै गीत गाएर अडिसनबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
९) फुर्बा लामा– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि पोखराबाट छानिएका नवौँ प्रतियोगी हुन् फुर्बा लामा । सानैदेखि सांगितिक परिवारका हुर्किएका फुर्बा पोखरा निवासी हुन् । आर्थिक अभावले पनि आफ्नो संगीत यात्रालाई रोक्न नसकेको बताउने फुर्बाले सानैदेखि ठूलाले गाएको देखेर गीत सिकेका हुन् । विवाहपश्चात पनि निरन्तर संगीत क्षेत्रमै सक्रिय भएका फुर्बा संगित क्षेत्रबाटै केही गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन् । उनले अडिसनमा ‘परेलीमा लुकाई राख न’ बोलको गीत गाएका थिए । निर्णायकहरुले अर्को गीत गाउन लाएपछि उनले ‘तिमी फेरि आउन’ बोलको गीत गाएका थिए ।आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा पहिलो नेपाल स्टार को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।